यसवर्षको अमेरिकी चुनाव खर्च ऐतिहासिक ! ट्रम्पको ‘रातो–क्याप’मा मात्र ८० लाख डलर लगानी - Yessamachar
यसवर्षको अमेरिकी चुनाव खर्च ऐतिहासिक ! ट्रम्पको ‘रातो–क्याप’मा मात्र ८० लाख डलर लगानी
बीबीसी । अमेरिकाको सन् २०२० निर्वाचनमा प्रचारकै लागि मात्र झन्डै १४ अर्ब डलर खर्च भएको रिपोर्ट गरिएको छ । राष्ट्रपति एवम् अमेरिकी कंग्रेसका सयौँ सदस्य छनोट गर्न यसपटक मतदान गर्ने नागरिकहरुको सङ्ख्या पनि उत्तिकै धेरै थियो । तर कोरोना महामारीका कारण यसवर्षको चुनाव अभियान अरुबेलाको भन्दा धेरै फरक देखिए पनि राजनीतिक सक्रियतामा भने कुनै कमी आएन । जसकारण यसवर्षको चुनाव प्रचार अभियानमा प्राप्त ‘डोनेसन रकम’ ले सबै रेकर्ड तोडेको छ ।
यसमा ट्रम्प र बाइडेनबाहेक अन्य राष्ट्रपति उमेदवारहरुले मात्र प्रचार अभियानमा यो वर्ष ६.६ अर्ब डलर खर्च गरेका छन् । यो भनेको पछिल्ला दुई निर्वाचनमा भएको खर्चलाई मिलाउँदा पनि धेरै हुन्छ ।
Previous articleकोरोना सङ्क्रमणबाट बुटवलमा थप दुईजनाको मृत्यु
Next articleकोरोनाविरुद्धको खोप सबै देशले एकसाथ पाउलान् त ?